Indlu kaTom - I-Airbnb
Indlu yasefama ebuyiselwe ngobumnandi ukusuka kwiminyaka yoo-1800s ekwifama esebenzayo kumaphandle aseKilkenny anoxolo phakathi kweelali zase Ballyhale nase Mullinavat.
'Indlu kaTom' ibonelela ngesiseko esihle kakhulu kwabo bajonge ukuphonononga iMpuma yaMandulo yaseIreland, ngakumbi iindawo zaseKilkenny, eWaterford naseWexford. Isixeko samaxesha aphakathi saseKilkenny kunye nesona sixeko sidala saseIreland, iWaterford zombini zingaphakathi kwemizuzu engama-25 yokuqhuba.
Indlu ibekwe ecaleni kweNdlela yeLeinster eMazantsi, umgama oziikhilomitha ezili-100 ukusuka eCarlow ukuya eTipperary.
Ibhedi, isitulo esiphezulu, ibhafu yomntwana kunye nesibulala-ntsholongwane ziyafumaneka xa uceliwe.
Indawo yabucala yangaphandle ekhoyo ukuze abantwana badlale kuyo.
I-cottage eyakhiwe kwi-1800s isanda kubuyiselwa. Uninzi lwamatye oqobo kunye nezileyiti ziphinde zasetyenziswa. Igumbi lokulala eliphambili linebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela eline-ensuite kunye nokuhamba kwi-wardrobe. Igumbi lokulala lesibini elikumgangatho ophezulu linebhedi ephindwe kabini enokufikelela kwigumbi lokuhlambela elikumgangatho ophezulu kunye neshawari. Igumbi lokulala elisezantsi nalo linebhedi ephindwe kabini kwaye likufuphi negumbi lokuhlambela elisezantsi kunye neshawari. Ezantsi kukho nekhitshi kunye negumbi lokuhlala elinesitovu samaplanga. Kukho indawo enkulu yokupaka kunye negadi enendawo yokuhlala ekhuselekileyo yelanga. Kukwakho neshedi yangaphandle elungele ukwenza barbequeing. Impahla yokuhlamba kunye nendawo yokugcina iibhayisekile njl ziyafumaneka kwenye indlu yangaphandle.
4.94 · Izimvo eziyi-211
Indlu ibekwe kwindawo esemaphandleni yaseKilkenny kwaye ijikelezwe ziifama zobisi ezisebenzayo. Indlu encinci yendlela ye-Leinster Way yaseMazantsi (Indlela yokuhamba).
Sizakubulisa xa ufika ukunikezela ngezitshixo. Sihlala kufutshane nabantwana bethu ababini. Sinokubonelela ngeengcebiso ngeendawo zokutyelela kunye nendawo yokutya. Siyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu kwaye sizibonise ngeenxa zonke.